Lahatsary: ​​Ny tsiambaratelo hangalarana valin'ny motera fikarohana
Ny tsiambaratelo hangalarana valin'ny motera fikarohana
Zoma Janoary 6, 2012 Zoma Janoary 6, 2012 Douglas Karr
Androany maraina dia mandefa ny anay aho fiofanana varotra ry olona pikantsary… pejy 1 amin'ny karoka Fiofanana momba ny varotra Sandler. Ny tsy manam-paharoa momba ny valin'ny pejy dia misy valiny video ao aminy - ho an'ny foibe fanofanana Charlotte Sandler. Ny lohateny sy ny famaritana ny video dia novaina tsara mba hahazoana azy amin'ny valin'ny karoka.
Misarika ny saina betsaka ity horonan-tsary ity satria ny hany sary aseho eo amin'ilay pejy, ary azoko antoka fa tsara ny tahan'ny click-through. Ny famaritana ny horonantsary dia manomboka amin'ny rohy miverina mivantana any amin'ny tranokalan'izy ireo ihany koa, mba hanampiana handroaka ny fiovam-po. Ny orinasan-dry zareo dia tsy mamela azy ireo hanatsara na hiasa amin'ny tranokalan'izy ireo, noho izany ny fahaizana mametraka horonan-tsary dia mety ho fitaovana lehibe indrindra amin'ireo ivon-toeram-piofanana ireo izay misarika ny saina amin'ny motera fikarohana.
Tsy ny Youtube ihany no dingana faharoa lehibe indrindra eto amin'izao tontolo izao, mampiseho ny valin'ny horonantsary koa izy ireo ho toy ny fizarana amin'ny valin'ny motera fikarohana maro ao amin'ny Google. Betsaka ny olona tsy te-hamaky fotsiny… te hitsambikina avy hatrany amin'ny horonan-tsary izy ireo. Vokatr'izany, tsiambaratelo nandritra ny fotoana ela ny orinasan-tserasera miditra, indrindra amin'ireo pejy misy teny karoka be mpifaninana. Ity ohatra etsy ambony ity dia iray tsara… miaraka amin'ny fiofanana momba ny varotra Sandler isaky ny tanàna lehibe, milalao toerana daholo izy ireo ary maniry ireo valim-pikarohana ireo ihany koa ireo orinasa mpanofana varotra.
Ny horonan-tsary dia lasa ampahany lehibe amin'ny fahafahan'ny orinasa mampahafantatra ny mpanjifa, serivisy amin'ny tsena ary mampitombo ny fisian'ny tranonkala. Ny fananganana fahaiza-manao Youtube amin'ny lozisainay SEO dia manome ny mpanjifanay hevitra manan-danja hijerena ny asan'izy ireo na ny serivisy hiseho eo amin'ny pejy voalohany amin'ny Youtube ary koa amin'ny Google. Krista LaRiviere, Cofounder ary CEO, gShift Labs
Tena zava-dehibe tokoa ny horonantsary, raha ny marina, ny orinasa tian'ny gShift Labs nampiditra Fanarahana video Youtube mivantana ao amin'ny tranonkalan'izy ireo fanatsarana motera fikarohana:
gShift Labs dia nanolotra horonantsary ho an'ireo mpanjifany ihany koa ny mpanjifan'izy ireo hanampiana azy ireo hanatsara ny horonantsary Youtube ho an'ny fanatsarana ny laharana:
Ny lohatenin'ny paositra, ny famaritana ary ny tag dia singa lehibe amin'ny fampiasana ny teny lakile amin'ny fomba mahomby. Miezaha mampiasa teny lakile ho toy ny teny voalohany fa tsy amin'ny teny afovoany na farany amin'ny lohateny sy ny famaritana. Raha manosika ny mpitsidika hiverina any amin'ny tranokalanao ianao, dia tena mamporisika anao hametraka URL ho ampahany voalohany amin'ny famaritana. Youtube ihany no mampiseho ny andalana voalohany amin'ilay famaritana raha tsy tsindrio ny fanitarana, noho izany ny fananana rohy aseho miharihary dia hiteraka fifamoivoizana bebe kokoa hiverina amin'ny tranokalanao.
Ny tantaran'ny doka
Mar 31, 2012 amin'ny 3: 13 AM
Douglas, tsara ny nanazavanao ny maha-zava-dehibe ny horonan-tsary. Fa ilazao zavatra iray izao: mila mampakatra ny lahatsariko manokana ve aho, sa afaka maka horonan-tsary mifandraika amin'ny YouTube fotsiny, ohatra?
Manontany an'io aho satria matetika, ny bilaogera dia tsy manana loharanom-pahalalana handraketana horonantsary ary hampakatra azy.